Maqaallada by Jenn Lisak Golding
10 Talaabo oo lagu maareeyo Isgaarsiinta Dhibaatooyinka
Isniintii, September 21, 2020 Talaado, September 22, 2020 Jenn Lisak Golding
Weligaa ma la kulantay dhibaato la xiriirta shirkaddaada? Hagaag, kaligaa ma tihid Isgaarsiinta qalalaasaha waxay noqon kartaa mid culeys badan - laga soo bilaabo jawaabta dib u dhacday ee waxa aad u maleyneyso inaad u sheegto dhammaan tixraacyada bulsheed ee imanaya si loo go'aamiyo inay dhibaato dhab ah tahay iyo in kale. Laakiin fowdada dhexdeeda, marwalba waa muhiim in qorshe la yeesho. Waxaan la shaqeynay kafaala-qaadayaasheena kormeerka bulshada
Saturday, May 16, 2020 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Jenn Lisak Golding
Maaddaama boodhadhyo iyo degello intan ka sii badan la daabacayo maalin kasta, welwelka guud ee jira ayaa ah xatooyo sawirro aad soo iibsatay ama aad u sameysay si shaqsiyeed ama xirfad-yaqaannimo ah. TinEye, oo ah mashiinka raadinta muuqaalka gadaal, wuxuu siiyaa dadka isticmaala awood ay ku baaraan url gaar ah sawirada, halkaas oo aad ka arki karto inta jeer ee sawirada laga helay webka iyo meeshii loo adeegsaday. Haddii aad ka iibsatay sawir kayd ah ilaha ay ka midka yihiin
Tilmaamaha Suuqgeynta Emailka Fasaxa Fasaxa Ugu Dambeeya ee Infographic
Arbacada, December 7, 2016 Khamiista, Sebtember 24, 2020 Jenn Lisak Golding
'Waqtiga waa xilli suuqgeynta ciida, iyo kafaala-qaadeheena email xaqiijinta barnaamijka' neverBounce 'wuxuu abuuray hagaha suuqgeynta iimaylka kama dambaysta ah ee raaxadaada aragtidaada. Xogta Xiriirka Qaranka ee Tafaariiqda waxay sii wadaa inay muujiso in qarashka uu kordhayo sanadkan, gaar ahaan khadka tooska ah waxaana wada dadaalada dhijitaalka ah. Suuqgeynta iimaylku waxay si gaar ah qayb weyn uga ciyaartaa, dukaamada tafaariiqlayaashuna waxay u baahan yihiin inay ku sii sugnaadaan ilaalinta liisaskooda oo nadiif ah oo cusub si loo ilaaliyo sumcadda diraya iyo wax-soo-saarkooda. Qaar